watchOS 4.3 beta 5 yakaburitswawo nezuro husiku | Ndinobva mac
Pakupera kwemasikati nezuro takagamuchira nhau nezve yekupedzisira yeiyo beta vhezheni yakasara kuburitswa kune vanogadzira. Iyo watchOS 5 beta 4.3 inowanikwawo kune vanogadzira uye pamwe nayo denderedzwa re beta shanduro dzinovhara svondo rino.
Maawa shanduro dzisati dzaburitswa macOS, iOS, uye tvOS beta. Pazvakaita sekunge vaizoisiya yezuva rinotevera (Apple yakatozviita pane imwe nguva), iyo nyowani beta vhezheni yakaonekwa pamwe neyakajairika bug fixes, kugadzikana kugadzirisa uye kuita kweOSOS.
Saka isu tatova nemabeta ese evashanduri aburitswa uye neizvozvo isu gadziridza zvimwe zvehurongwa hwekuita wega mune ino kesi, senge iyo yemubhedha nzira kana wachi wachi paunenge uchichaja. Chero zvazvingaitika, iyo Apple Watch uye kunyanya yazvino vhezheni yacho inoshanda zvinoshamisa maererano nehunyoro hwesisitimu, bhatiri uye kugona mukuvhura mashandisiro atakaisa, nezvimwe.
Sezvo isu tichigara tichinyevera nezve idzi beta shanduro dzeApple Watch, chinhu chakanakisa chekugara kunze kunzvenga matambudziko ndechekuti muApple smart wachi hapana sarudzo dzekuisa vhezheni yapfuura kana iwe uchinge wagadzirisa kana beta kana yekupedzisira vhezheni. Mupfungwa iyi, chero kukanganisa kunogona kuuraya mushandisi, zvichisiya mudziyo usingashandisike, saka kurudziro sezvagara iri gara kunze kweshanduro idzi dze beta uye rega vagadziri vaedze ivo uye uwane isu nhau dzako. Kune iyo Apple Watch hapana yeruzhinji beta shanduro dzevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4.3 beta 5 yakaburitswawo nezuro husiku
Gadzira makopi eAPFS mapikicha neCarbon Copy Cloner beta